Afriikaa Kibbaatti Ammas Baqattoota Irratti Balaan Dhaqqabe
Hagayya 15, 2019
Faayilii - Lammii Itoophiyaa suuqiin isaa Johaansibargi keessa jiru jalaa sammame, Hagayya 2018
Afriikaa Kibbaa kutaa Bulchiinsa Sooweetoo jedhamtu keessatti balaan baqattoota irratti dhaqqabe. Nahwii Musaa Itti Aanaan Hawaasa Baqattoota lammilee Itiyoophiyaa akka jedhanitti kaleessa jiraattonni naannoo dukkaana baqattootaa saamuu dubbatan.
Kaleessa galgala Afriika Kibbaa kutaa bulchiinsa Sooweetoo jedhamtu keessatti baqattoonni dukkaana qaban qabeenyi isaanii saamamuu hawaasi baqattoota Itiyoophiyaa ka Afriikaa kibbaa beeksise. Naahwii Musaa Itti Aanaan Itti gaafatamaa hawaasa baqattoota Itiyoophiyaa Afriikaa Kibbaa fi dura taa’aan hawaasa baqattoota Oromoo ta’een kun mudachuu Sagalee Ameerikaaf dubbatanii jiru.
‘Ammas Nama Caalutu Hidhaa Jira’ Bakka Bu’aa Hawaasa Baqattoota Oromoo Afrikaa Kibbaa
Obbo Naahwiin waa’ee balaa dhaqqabee yoo dubbatan balaa kanaan qabeenya bade fi lammii Itiyoophiyaa miidhame adda baafachuun rakkisaadha jedhan. Warri naannoo ka badii kana geessiseefis torbee achi aanu waldhabbii poolisii biyyattiitii fi baqattoota Afriikaa kibbaa jiraatan gidduutti mudate haaloo bahuun wal akka qabatus dubbatu. Namootni balaa dhaqqabsiisanis humna nageenya kabachiisuu ol turanii jedhu.
Miidiyaaleen biyyattii akka gabasanitti kaleessa jirattonni naannoo Sooweetoo naannawa Zola, Indeenii, Okbaa fi Orlaando jedhamanitti qabeenya fi dukkaalee lammilee biyyoota alaa hedduu saamaniiru.
Balaa kana dhaabsisuufis Poolisiin Afriikaa Kibbaa yaalus warri naannoo daandii cufee balaa kana geessisuun rakkoo ture jedhu obbo Naahwiin.